Prince Kuhio Zuva rinoita kuti Hawaii Tourism Authority ikanganwe kukwira kwenhamba dze COVID-19
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » Prince Kuhio Zuva rinoita kuti Hawaii Tourism Authority ikanganwe kukwira kwenhamba dze COVID-19
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • Health News • Hotera & Resorts • Kamaainas • vanhu • chengetedzo • Shopping • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Iyo US State yeHawaii inoenderana neyekufamba uye yekushanya indasitiri Chinyararire vashanyi vanosvika vakakwira pamusoro pemwedzi wapfuura zvichienzaniswa nechero nguva mudenda. Izvi zvichave zvakagadzikana here?
Vashanyi veHawaii vanosvika manhamba kubva kuUS Mainland anga achiwedzera kunyora manhamba pamasvondo mana apfuura
Hawaii zvakare yakarekodha rekodhi zuva nhasi muhuwandu hwezviitiko zvitsva zveCOVID-19 kweinopfuura mwedzi
Prince Kuhio Day chikonzero chinogamuchirwa chevatungamiriri veVashanyi kupemberera nekugara vakanyarara pane ino mamiriro ari kusimukira yeHawaii yekufambisa uye indasitiri yekushanya, hupfumi hwese, uye hutano mamiriro
NdiPrince Kūhiō Day muHawaii nhasi, uye vakuru vakuru veHurumende havawanikwe kuti vapindure kana kutaura pamusoro penzwi rinotyisa muhutachiona hwe COVID-19 mu Aloha Taura pamusoro pemazuva maviri apfuura. Hawaii ikozvino yadzokera mutsika yekuwedzera katatu manhamba izvo zvinofambidzana nenhamba inowedzera inosvika yekuuya kwevaenzi kubva kuUS mainland kwemavhiki mashoma apfuura. Nhasi Hurumende yakanyora nyaya gumi nembiri.
Akanyanya kutaura pachena Honorulu Meya Rick Blangiardi akaudza eTurboNews mukutaura:
Oahu achiri muchikamu cheTier 3 chematanho ekuvhurazve. Guta rinoongorora mamiriro azvino uye rinoziva kuti kwave nekukwiridzira mune dzakanaka COVID-19 kesi muvhiki yapfuura paO'ahu. Hutano hwepaguru ndihwo hunokosheswa uye Guta riri kuenderera mberi richishanda neHurumende Dhipatimendi rezvehutano uye nyanzvi dzehutano kuyera njodzi dziripo nekugadzirisa pazvinenge zvichidikanwa. Isu tinoenderera mberi nekuvhura zvakachengeteka hupfumi tichitendera vanhu vazhinji kuti vadzokere kumabasa. Nharaunda inofanirwa zvakare kushanda pamwechete kudzivirira hutachiona nekuenderera mberi nekupfeka mamask, vachiramba vari kure nemuviri uye vachitevedzera mitemo yezano rekuvhurazve.
Zvichakadaro, imwe ndege mushure meimwe iri kuzivisa nendege nyowani kumisika yekuwedzera yevaenzi. Dzimwe dzendege idzi dzinoshanda kubva kumatunhu aionekwa sekondari kuHawaii, asi misika yepamberi yeCaribbean.
Tichifunga nezvekuti vanosvika kune dzimwe nyika vanobva kuCanada, Japan, Korea, Australia, New Zealand vanga vasati vatangazve, kuwedzera kunoshamisa kwebhizimusi repamba kwaive kusingatarisirwe kune vakawanda.
Munguva pfupi kuwedzera kwevashanyi inyaya dzakanakisa dzemahotera, zvinokwezva, maresitorendi, mashopu uye chikamu chekufambisa, asi zvinogona zvakare kuve njodzi mukugadzira kwenguva refu.
sezvo Hawaii Tourism Chiremera iri kupemberera Prince Kuhio Day nhasi, hakuzove nechero zvataurwa pamusoro peichi chiitiko kusvika Muvhuro, Muvhuro wePasika netariro. Mumwe anogona kungotarisira kuti iyi ichave yave mbeveve nyaya neMuvhuro, zvinoenderana nenhamba dzehutachiona dzeCOVID-19 mumazuva maviri ari kuuya.
Panguva ino Hawaii iri kunyatsoita basa rekubaya vagari vayo. Kubva neMuvhuro chero munhu makumi matanhatu zvichikwira anokwanisa kuwana mushonga, uye mapoka ese akakosha akabaiwa nhomba ikozvino.
Nei Hawaii ichipemberera Prince Kuhio Day nhasi?